Kuchengeterwa mota yekubhadhara pamutengo wakanakisa?
Kana uri kutsvaga mota yekurendesa, kuburikidza neinotevera injini yekutsvaga iwe unogona kuwana izvo zvaunoda.
Kuronga rwendo runogona kuve rwakareruka basa kana, pane zvinopesana, chinangwa chinopfuura zvisingaite. Sarudza zvakanaka kwairi kuenda, kutiza, hotera ..., zvinhu zvakawanda zvekufunga nezvazvo uye zvaunofanirwa kusarudza zvakanaka kuti usamhanye. Kune zvese izvi zvinofanirwa kuwedzerwa chimwe chinhu chakakosha kwazvo: Chii chekuita kana tichifanira kufamba nzendo refu kana kushanyira maguta akasiyana panguva yerwendo rwedu?
Sarudzo huru mune idzi kesi, uye yakapusa pane zvese, kushandisa zvifambiso zveruzhinji. Nekudaro, sarudzo iyi inogona kutikonzera kuwanda kupfuura izvo zvinomuka pakutanga kuona, nekuti isu tiri pasi pechirongwa chakatarwa uye mutengo wekupedzisira werwendo unogona kunge wakakwira zvakanyanya nekuda kweichi chiitiko. Pane kudaro, hazvisi nyore nguva dzose kutora yako mota kuenda newe. Zvino toitei?
Mhinduro kumubvunzo uyu yakapusa. dzimba dzekurenda. Rudzi rwemotokari rwuri kuramba ruchidiwa nevashandisi vanoda kuve nerwendo rwakanaka vasina zvinotyisa. Ichokwadi kuti kuroja mota nhasi haisi pfungwa inokwezva kune vanhu vazhinji, avo vachiri vasingazive nezvayo mabhenefiti.
Tevere, isu tinokubatsira iwe, gadzirisa akawanda ekusahadzika kwako uye tinokutungamira iwe kana uchihaya mota. Kana iwe uchida kuwana yekurenda mota nemutengo wakanakisa, iwe unofanirwa kungobaya apa.
Zvakanakira kushandisa dzinoroja mota
Sezvatakambotaura, kushandiswa kwekufambisa kwevanhu kune zvakawanda zvisina kunaka zvichienzaniswa nezvakanakira izvo izvo chokwadi chiri nyore chekurenda mota chinotipa.
Chekutanga pane ese ndeche libertad. Kufamba sekureba sezvaunoda chinhu chakanakisa. Kuenda kwaizove kunetseka kwemukomana: bhazi rinosimuka nguvai? Iwe unofanirwa kutora kupi nzira yepasi? Nezvimwewo, izvo zvinogona kuve kutambudzwa chaiko.
Chechipiri, iyo nyaradzo. Hazvina kufanana kufamba mubhazi kana metro izere nevanhu yekuchengetera mukwende wako inogona kunge iri rwendo rwese, nekuti pazviitiko zvakawanda hatina nzvimbo inodiwa. Nekudaro, kana isu tichihaya mota, ese aya mamiriro anobviswa.
Imwe kiyi ndeye, pasina mubvunzo, iyo kuchengetedza. Kubhadhara mota kunogona kuita ingangoita € 5-15 pazuva, chimwe chinhu chiri pasi pemutengo wekutora mabhazi akati wandei, matekisi, nezvimwewo, kufamba uchibva pane imwe nzvimbo uchienda pane imwe.
Zvimwe chete zvezvakanaka zvekurenda mota zvakataurwa. Zvirokwazvo, iwe kana iwe wafunga kuzviita, iwe uchaona kuti kune akawanda akawanda.
Unogona kuroja mota pamhepo?
Munyika yepasi rose ine hunyanzvi mune iyo internet yatyora zvipingamupinyi zvese zvinogona kuitika, zvinofanirwa kutaurwa zvakajeka kuti, zviri pachena, zvinogona kurenda mota online.
Kana tikapedza mashoma enguva yedu yakakosha tichitsvaga nemakomputa edu kana Smartphone, tichaona kuti netiweki izere nemakambani akatsaurirwa chikamu ichi uye kubva kwatinogona kushandisa masevhisi avo nenzira yakapusa uye zvachose online.
Tinogona zvakare kuwana inozivikanwa injini dzekutsvaga, iyo inofambisa basa redu nenzira inoshamisa. Idzi injini dzekutsvaga dzinokambaira pakati pezvakasiyana zvipo zvekutiratidza izvo izvo zvinonyanya kutaridzika uye zvinonakidza kwatiri.
Pakati pemakambani ane mukurumbira isu tinoratidzwa bhajeti y maonero. Budget isangano reCalifornia rakavambwa mukupera kwema50, iro parizvino rine zvinopfuura 3000 mahofisi ari munyika zana nemakumi masere neshanu pasirese. Kune chikamu chayo, Avis inozivikanwa nekuve patinogona kusangana kwakawanda kwemotokari dzemarudzi ese uye mamiriro ekugutsa chero mushandisi.
Uye, kusvika padanho rekutsvaga online, isu hatigone kusiya tisingataure KAYAK, inotungamira nharembozha inofarira kunzwirwa tsitsi neruzhinji rweveruzhinji nezve kugona kwayo uye nyore. Usazeze kuishandisa.
Mota dzekutsvagisa mota dzinoshanda sei paInternet?
Un online mota yekutsvaga injini ndechimwe chezvishandiso zviri nyore kushandisa. Zvakare, angangoita ese masisitimu aya anoshanda zvakafanana.
Sezvauri kuona mune yedu yekuhaya mota yekutsvaga injini, inotiratidza diki ine akasiyana maburi kana isina mabhokisi mabhokisi atinogona kuzadza neruzivo rwatinobvunzwa.
Kazhinji, isu tinobvunzwa nzvimbo yatinoda kusimudza mota. Mushure, mazuva ekuunganidza nekutakura zvimwe chete. Uye, pakupedzisira, tichazadza ne maficha emota pachayo: mhando, modhi, nezvimwe.
Ehezve, zvichienderana neinjini yekutsvaga yatiri kutarisana nayo, tinofanirwa kupa rumwe ruzivo kana rumwe, asi sekutonga kwakawanda izvi ndizvo zvinowanzo kuve izvo zvinowanzo fanirwa kwatiri.
Kadhi rechikwereti rinodiwa here kuroja mota?
Kurendesa mota usina kiredhiti kadhi zvinogona kunge zvisingaite, nekuti makambani anoita basa iri kazhinji haana hushamwari kubhadhara mari.
Icho chikonzero cheichi chiri nyore kwazvo. Mota inodhura, inonetsa kuitisa basa, nekudaro kuona kuti iri muchimiro chakanaka mushure mekushandiswa kwakakosha. Kuti vaite izvi, ivo vanogadzira mhando ye inshuwarisi izvo zvinowedzerwa kumutengo wekutanga wekubhadhara mota.
Yakati inishuwarenzi ichabhadharwa chete nemushandisi kana izvi zvave kukonzera dambudziko mumotokari. Zvichakadaro, ivo vanoramba vakachengetedzwa mune izvo zvinozivikanwa se dhipoziti, icho hapana chimwe kunze kwekutanga kuvharirwa kweimwe huwandu hwemari yakazara inowanikwa pakadhi, inozoburitswa pakuunzwa kwemota iri mumamiriro akakwana.
Ichi ndicho chikonzero chikuru nei makadhi echikwereti anowanzo shandiswa kana uchihaya mota. Asi isu tinoti kazhinji nguva dzose, nekuti izvi zviri kuchinja, uye nhasi zvinokwanisika kukwereta mota kuburikidza ne kubhadhara mari mune mamwe makambani se, semuenzaniso, AutoEurope.
Kubhadhara mota pakati pevanhu
Mazuva ano, makambani matsva akabuda anoshandisa imwe nzira yekushanda. Ivo havasisiri ivo vanoisa yavo yega mota kwatiri, asi asi ivo vanozviita nenzira kunyanya.
Ndokunge, vanhu vakasiyana vanobvarura mota yavo kuburikidza nekambani, nechinangwa chete chekuita purofiti. Kuburikidza neshambadziro, ivo vanogadza mutengo uye kuwanikwa, uye mapato anofarira anovabata. Muroja nemutengi vanosangana kuendesa uye kuunganidzwa kwemotokari, iyo inofanirwa kugara iri muchimiro chakaringana uye ine yakazara tangi peturu.
Nenzira iri nyore, chii chinozivikanwa se 'kubhadharisa mota pakati pevanhu'.
Chekupedzisira, kana iwe uchizoda kubvarura mota kwenguva yakareba kwazvo, pamwe sarudzo yekuhaya Mercedes kana chero imwe mhando yeprimiyamu ichave iri nani kwauri nekuti ivo vanopa yakakwikwidza mitengo uye mushure mechinguva unogona kusarudza kuimutsiridza kana kuidzosera pasina chisungo.